HORDHAC: Burton v Manchester City – Gool FM
HORDHAC: Burton v Manchester City
( Caraboa Cup ) 23 Jan 2019. Manchester City ayaa booqaneysa kooxda Burton Albion lugta labaad ee afar dhammaadka Caraboa Cup.
City ayaa boqolkiiba boqol xaqiijisay finaalka kaddib markii dheeshii lugta hore ay ugu awood sheegteen kooxda yar 9-0.
Leyliyaha Burton Nigel Clough ayaa sheegay in haddii ay gool dhaliyaan kulanka lugta labaad ee afar dhammaadka Carabao Cup ay la cayaarayaan Manchester City ay u noqon doonto “guul cajiiba”.
Kooxda horyaalka heerka seddaxaad ama League One ayaa ku qasaartay kulankii lugta hore 9-0 dheeshii ka dhacday Etihad Stadium – iyagoo cayaartaa sameeyay hal shuug oo guulkaa.
“waxay noqon doontaa dhacdo yar, iyo sharaf dabcan,” ayuu yiri Clough.
“haddi mid kamida xiddigaheena laga yaabo inuu gool ka dhaliyo mid kamida kooxaha ugu wanaagsan qaarada yurub intaa kaddib waxay noo noqon doontaa guul.”
City ayaa u baahan kaliya 3-gool si ay ugu badiyaan ebada guul rikoodha taariikhda koobka League Cup – iminka guusha rikoohkaa ee tartanka waa 11-gool taasoo lagu adkaaday shan jeer.
Laakiin Burton, taa oo noqon koox kubbada cagta ah 10-sano kahor ayaa ku jira kaalinta 13-aad ee horyaalka League One ama heerka seddaxaad – 55 boos ayaan u dhaxeysa kooxda horyaalka sare ee City – waxay hore ugu soo adkaadeen naadiga Premier League ee Burnley, si lamida kooxaha horyaalka labaad ama Championship ee Aston Villa, Nottingham Forest iyo Middlesbrough oo ay kusoo gaareen wareega afar dhammaadka.
Mendy, De Bruyne & xiddigaha da’yarta City ayaa la filayaa iney kulankan saftaan.
Kulanka qura oo ay hore u kulmeen kooxaha Burton iyo Man City ayaa ahaa cayaartii lugta hore ee tartanka – iyadoo Burton ay soo gaartay guuldarradoodii ugu weyneed tan iyo markii ay noqdeen koox kubbada cahta ah 2009-10 waana (0-9).
Guushii Man City ay 9-0 uga badisay Burton lugta hore ee koobka waa guushoodii ugu weyneed ebed afar dhammaadka tartanka.
Burton ayaa guuleysatay laba kamida seddaxdii kulan ee u dambeysay oo ay la cayaartay kooxaha Premier League, waxay ka guuleysteen League Cup QPR 2014-15 iyo Burnley xagaagan.
Manchester City ayaa eegeysa iney garaan finalka labaad oo xariira League Cup markii u horreysay. Kooxdii u dambeysay ee gaarta laba kol finaalka koobkan waxay aheyd Manchester United xilli cayaareedyadii 2008-09 iyo 2009-10.